၀ ယ်သူရည်ရွယ်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏စျေးကွက်မဟာဗျူဟာကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်မည်သို့မြှင့်တင်နိုင်သနည်း Martech Zone
၂၀၁၉ ခုနှစ်ရောက်ရင်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတွေမသုံးဘူးဆိုတာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာ သူတို့ရဲ့အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစပျိုးမောင်းထုတ်ရန်။ ဤမျှနက်ရှိုင်းသောနက်ရှိုင်းစွာတူးဖော်နိုင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလမ်းစဉ်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းသည်သင်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအားအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုထောင့်များစွာကိုကြည့်ရှုလိုကြသည် ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာ နှင့်အနာဂတ်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများအတွက်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်။ အောက်ပါတို့အားလုံးကိုဆန်းစစ်ပါမည်။
Data Intent ဆိုတာဘာလဲ
Image ကိုရင်းမြစ်: https://www.slideshare.net/infer/what-is-intent-data
အရိုးရှင်းဆုံးအသုံးအနှုန်းမှာရည်ရွယ်ချက်ဒေတာသည် ၀ ယ်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြသောအွန်လိုင်းအပြုအမူများကိုတိကျစွာဖော်ပြသည့်အခါပြသသည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့်ဖော်ပြသည် - internal data နှင့် external data ။
သင့်ဝဘ်ဆိုက်၏ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ: ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုမ္ပဏီအကြောင်း၊ ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုစသည်တို့ကိုပိုမိုသိလို။ ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆက်သွယ်နေသည်။
ဒေသခံဖောက်သည်အချက်အလက် ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါ CRM ​​သို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်ဒေသခံဖောက်သည်များထံမှရရှိသောအချက်အလက်များသည်အလွန်အဖိုးတန်သည်။ ဝယ်ယူရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပိုမိုနီးကပ်စွာရွေ့လျားနေသော ဦး ဆောင်သူများကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်အချက်အလက်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကအသုံးပြုသည်။
ပြင်ပရည်ရွယ်ချက်ဒေတာကို third-party ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများမှတစ်ဆင့်ကောက်ယူပြီးပိုမိုတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်ကြီးမားသောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုမျှဝေထားသော cookies များမှတဆင့်စုဆောင်းပြီးအိုင်ပီအဆင့်တွင်ကောက်ယူသည်။ ဤအချက်အလက်များသည်သိန်းနှင့်ချီသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိတိကျသောစာမျက်နှာများသို့သန်းပေါင်းများစွာလည်ပတ်မှု၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
တိကျသောစာရွက်စာတမ်း၊ ဖိုင် (သို့) ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို download လုပ်သည့်အကြိမ်အရေအတွက်
Intent Data ကိုဘယ်လိုရယူသလဲ။
Image ကိုရင်းမြစ်: https://idio.ai/resources/article/what-is-intent-data/
ရည်ရွယ်ထားသောအချက်အလက်များကို B2B ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အကြောင်းအရာထုတ်ဝေသူများထံမှအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းသောရောင်းချသူများကပြုစုသည် ဒေတာဝေမျှ Co-op။ သေချာတာပေါ့၊ လူတစ်ယောက်ဘယ်ဆိုက်ကိုသွားတယ်၊ သူတို့ရှာဖွေတဲ့စည်းမျဉ်းတွေ၊ သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုသိဖို့စိတ်ကူးကသူ့မျက်နှာကနည်းနည်းဆိုးရွားလာပုံရတယ်။ ဒေတာများကိုဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်စုဆောင်းသိုလှောင်ပြီးတော့ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များနှင့်အတူမျှဝေ (သို့မဟုတ်ရောင်းချခဲ့သည်) ။ ဥပမာအားဖြင့် copywriting company တစ်ခုသည်ရှာဖွေရေးဝေါဟာရများကိုရိုက်ထည့်သောကုမ္ပဏီများ (သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်တစ် ဦး ချင်းစီ) ကိုအထူးစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။အက်ဆေးအရေးအသားန်ဆောင်မှုအဓိကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးစုံရောင်းဝယ်သောဆိုဒ်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းစသည်တို့ကို ၀ ယ်လိုသည်။
များသောအားဖြင့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းပြီးအပတ်စဉ်အစီရင်ခံသည်။ စာသားအတိုင်းဘီလီယံနှင့်ချီရှာဖွေမှုများ၊ site လည်ပတ်မှုများ၊ downloads များ၊ click-through များ၊ စကားဝိုင်းများနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများအားဖြင့်ရောင်းချသူများသည်အကြောင်းအရာများသုံးစွဲမှုကိုပရိုဖိုင်းနိုင်ပြီးများပြားလာမှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
ဒီဗီဒီယိုမှ Bombora ဒါကဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းစွာရှင်းပြတယ်။
Data Intent သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
Image ကိုရင်းမြစ်: https://gzconsulting.org/2018/08/02/what-is-intent-data/
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသန်းနှင့်ချီသောလူများသည်သန်းနှင့်ချီသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်အင်တာနက်ကိုသုံးကြသည် ဆေးဆေးလေးလေး တိကျသောအွန်လိုင်းအကြောင်းအရာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပါ။ မည်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကအရေးအပါဆုံးဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးသတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောတိကျသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများကိုစတင်လေ့လာပါ။ စျေးကွက်သမားသည်အကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
ရှိပြီးသားဖောက်သည်အကောင့်များအမည်များနှင့် URL များ
တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်များ၏အမည်များနှင့် URL များ
စက်မှုလုပ်ငန်းသြဇာနှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက် URL များ
ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပြproblemsနာများ / နာကျင်မှုအချက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သည့် / လိုချင်သောရလဒ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရိုးရှင်းပြီးရှုပ်ထွေးသောရှာဖွေရေးဝေါဟာရများ
အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုသတိပြုမိစေရန်နှင့်မှတ်သားထားသည့် algorithms များတွင်ထည့်သွင်းထားသည် (သန်းပေါင်းများစွာသောရှာဖွေမှုနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အချက်များ) စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များသည်ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်များ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ ကုမ္ပဏီအမည်များ၊ အလားအလာရှိသည့်ခေါင်းစဉ်များ၊ တည်နေရာများ၊ ၎င်းတို့သည်သူတို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများကိုခွဲခြားဖော်ပြသည့်ဆက်စပ်သည့်အချက်အလက်များကိုပြသသည်
လေ့လာသူများသည်အထွေထွေရှာဖွေမှုများ၊ ပြိုင်ဘက်များနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ခြင်းနှင့်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မေးမြန်းခြင်းများပါဝင်သည်။ ဒေတာသည်အမျိုးအစားများနှင့်အစပျိုးခြင်းများအားဖြင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုလည်းချိုးဖျက်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါဟာအလားအလာ (သို့) ဖောက်သည်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုသာပြသည် အဘယ်ကြောင့် သူသို့မဟုတ်သူမလုပ်ခဲ့တယ်.
လက်ရှိဖောက်သည်များ၊ ပစ်မှတ်အကောင့်များနှင့်သရုပ်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်၏ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ရပ်များကိုဖော်ထုတ်သည့်အချက်အလက်များကိုအလံလွှင့်ထုတ်ရန်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်သင်ရောင်းချနေသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နေသောတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်ကိုဒေတာတစ်ခု Alignment နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု tool အဖြစ်
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်အမုန်းတရားနှင့်ဆက်နွယ်သောဆက်ဆံရေးမျိုးအမြဲရှိခဲ့သည်။ အရောင်းအဖွဲ့များသည် ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသောအရည်အချင်းပြည့်မီသော ဦး ဆောင်သူများကိုလိုချင်ကြသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များသည်စောစောစီးစီး ဦး ဆောင်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၊ သူတို့နှင့်ထိတွေ့ရန်နှင့်ထိုအဆင်သင့်အနေအထားသို့ရောက်ရန်အထိပြုစုပျိုးထောင်ရန်လိုသည်။
ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ရလဒ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှစ်ခုလုံးကိုအကျိုးရှိစေသည်။ ၎င်းသည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်းများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အချက်အလက်များကိုအနက်ဖွင့်ခြင်းနှင့်အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်ထိရောက်သောမဟာဗျူဟာများရေးဆွဲခြင်းတို့အတွက်ပူးပေါင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာများကိုမည်သို့ပူးပေါင်းကြောင်းအသုံးများသောသာဓကအချို့ကိုဖော်ပြလိုက်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါနယ်ပယ်တစ်ခုစီသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ရောင်းအားနှစ်ခုလုံးအတွက်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးတွင်အောင်မြင်မှုသည်ကုမ္ပဏီကိုရှေ့သို့တိုး။ အဖွဲ့များအကြားအကျိုးဖြစ်ထွန်းပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။
ရည်ရွယ်ချက်အချက်အလက်များကိုအသုံးချခြင်းသည်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးတစ်ခုမှာအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ၀ န်ထမ်းများကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှ ၀ ယ်သူအမြောက်အများကိုပစ်မှတ်ထားရန်ကူညီနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်တစ်ခုတည်းသောပစ်မှတ်စျေးသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ထက်မကပါဝင်နိုင်သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အတွက်အရေးကြီးသောအရာသည်များသောအားဖြင့်အခြားတစ်ခုနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒေတာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့အအကြောင်းအရာများကိုစိတ်ကြိုက်ကူညီပေးသည်။ ရာနှင့်ချီသောအဖွဲ့အစည်းများသည် ၀ က်ဘ်ရှာဖွေမှုများတွင်အလားတူစံနှုန်းများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်အချက်အလက်များသည်ခိုင်မာသောနှင့်အောင်မြင်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများတည်ဆောက်ရန်အတွက်မြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာဖန်တီးရန် ဦး တည်ကူညီသည်။
၀ ယ်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းသည်စျေးကွက်သမားများနှင့်အရောင်းပညာရှင်များကိုကြီးမားသောယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်ကိုပေးသည်။ ရည်ရွယ်အချက်အလက်များ၏စုဆောင်းမှုနှင့်အရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စုဆောင်းထားသောဒေတာများသည်လူ ဦး ရေအချိုးအစား၊ ပထဝီအနေအထားနှင့်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အချက်အလက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ထိုဆက်နွယ်မှုများမရှိပါကတိကျသောအပြုအမူများသည်ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်အပြည့်အဝနားလည်ရန်ခက်ခဲသည် (ဖတ်ပါ - အနီးစပ်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ပါ) ။
တိကျတဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတဲ့အခါနားလည်မှု ဝယ်သူတစ်ဦး အရောင်းနှင့်စျေးကွက်နှစ်ခုစလုံးသည်အဆင့်တစ်ခုစီမှ ဦး ဆောင်။ သက်ဆိုင်သော၊ အသုံး ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရာထူးများကိုထူထောင်ထားသည် ဝယ်သူခရီး.
ရည်ရွယ်ချက်အချက်အလက်များကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာများ၊ ဝက်ဘ်ဆောင်းပါးများနှင့်သင်၏ပစ်မှတ်စျေးကွက်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်ကြောင်းဖော်ပြသည့်အခြားစာဖြင့်ရေးသားထားသောပုံစံများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာသည်စုဆောင်းထားသည့်ရည်ရွယ်ချက်အချက်အလက်များမှတဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသောအထူးသဖြင့်ပြproblemsနာများနှင့်နာကျင်မှုအချက်များကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။ ဤအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအခွင့်အာဏာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအသိဉာဏ်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊
မူလအကြောင်းအရာကိုလက်လှမ်းမီရန်ကျယ်ပြန့်သောနည်းဖြင့်ဖြန့်ဝေရန်လည်းအလွန်အမင်းအကြံပြုလိုသည်။ ၎င်းတွင်ပစ်မှတ်ထားသည့်အကြောင်းအရာအားလုံးတွင်ထုတ်ဝြေခင်းနှင့်စုစည်းခြင်းဗျူဟာကိုရေးဆွဲခြင်းပါဝင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ရည်ရွယ်ချက်အလားအလာကိုထင်ဟပ်စေသောအကြောင်းအရာများကိုထင်ဟပ်စေပြီး၎င်းသည်ရည်ရွယ်ထားသောပရိသတ်ရှေ့တွင်၎င်း၏လမ်းကိုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
ရည်ရွယ်ချက်အချက်အလက်များအားထိရောက်စွာ အသုံးပြု၍ အမြတ်ထုတ်သောခဲမျိုးဆက်စီမံချက်သည်အရောင်းသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်အားသာချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအဓိကပြိုင်ဘက်များနှင့်ပင်သီးခြားခွဲ ထား၍ နောက်ဆုံးတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရနိုင်ခြေများပြားလာသည်။
အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုး (ရှာဖွေမှုများ၊ site လည်ပတ်မှုများ၊ ပြိုင်ဘက်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုစသဖြင့်) တွင်အလားအလာရှိသောအချက်ပြမှုများကိုထင်ဟပ်စေသောတိုက်ရိုက်၊ ချောမွေ့သောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဦး ဆောင်မှုကိုဖန်တီးရန်ကူညီရုံသာမကသင်၏အောက်ခြေလိုင်းကိုလည်းကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။ ရည်ရွယ်ချက်ဒေတာကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုအောင်မြင်စေပြီးသင်၏အရောင်းအဖွဲ့ကို ၀ ယ်ရန်အများဆုံးသောအကောင့်များအပေါ်ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်စေသည်။
Jilian Woods သည်အလွတ်ဂျာနယ်လစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးနှစ်နှစ်ကျော်စာအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာတစ် ဦး အနေဖြင့်သူသည်ရည်ရွယ်ချက်အသစ်ကိုလေ့လာလိုစိတ်ရှိသူများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုမျှဝေရန်နှင့်မျှဝေရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူမ၏တစ်နေ့တာအလုပ်အပြင်သင်သည်ဂျီလီယန်အားစေတနာ့ဝန်ထမ်းခြင်းနှင့်ယောဂကျင့်ခြင်းတွင်ပါဝင်သည်ကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။